Cormorants - Iintaka - Mzantsi Afrika
Ngenxa yohlobo lwazo ezimnyama, iiCormorants idla ngokubizwa ngokuba yijuba elwandle. Enyanisweni, igama lentsapho, i-Phalacrocoracidae, lithetha inqanaba e-Greek. Ngoxa i-Cormorants ibonakala ibumnyama, ukuhlolwa okufutshane kubonisa ukuba, ngokwenene, iindidi ezinemibala emnyama ephuma eluhlaza kunye ne-violet ukuya kwi-ultramarine kunye nebhedu.
Kwiindawo zokuzalanisa, eziintaka zasemanzini zinamaqabunga aqaqambileyo, ezenzeka kwimimandla eyahlukeneyo, zijikeleza amehlo kunye nomqala. Ii-cormorants anesigxina segular, okanye isikhwama somqala, esinemisebenzi eyahlukahlukeneyo.
Isebenza njengendawo yokubamba ixhoba elikhulu, inceda le ntaka ilawule ukushisa okwexeshana xa ixuma, kwaye ngexesha lokuzalisa, imibala eqaqambileyo esetyenziselwa ukuboniswa ngexesha obudlelwane. Ukujikeleza ukusuka kwi-63 ukuya kwi-101 cm ubude, ezi ntaka zamanzi ziye zahlula iindleko eziqhelekileyo, ezincinci. Nangona iinyawo zawo ezinkulu zenza ezi ntaka zihamba ngokugqithiseleyo, aziyizixhobo ezihamba phambili.
Ngokuqhelekileyo, iinyawo ziyaqhaqhazela kwaye ukuhlutha kwazo kuholele kumaqanda amaninzi aphukile. Iimpawu zesakhiwo ezenza izixhobo ezinokubhukuda, zichaphazela amandla abo okuhamba. Umlenze omkhulu kunye nezihlunu ze-sinqa ezinika amandla aphantsi kwamanzi amaninzi zibenza zibe nzima malunga nommandla wamaphiko azo. Yiyo le mpawu egcina ezi ntaka ezinkulu zijikeleza kwiindawo zazo. azizange baqhubele phambili ukuya elwandle.
Kufunyanwe amanzi kunye netyuwa, ukutya kwazo bubuninzi kwiintlanzi, kodwa ii-amphibians ezincinci kunye nee-crustaceans nawo adliwe.
Ukuhlamba eyi-3-5 amaqanda, amaqanda ahlaza okwesibhakabhaka eluhlaza kwiplani eyenziwe kakuhle, okanye elunxwemeni, abekwe emthini okanye kwisiqithi. Bazinzisa izidleke kunye ne-guano kwaye ziya kusebenzisa isidleke esifanayo kwakhona. Izilwanyana kwiikoloni.
Nangona zichitha ixesha elininzi emanzini, azinalo ioli ye-waterproofing yezinye izilwanyana zaselwandle kwaye ngoko kufuneka bachithe ixesha elininzi bomisa amaphiko abo. ii-Cormorants zisebenzisa iindawo eziqhelekileyo zokuqhuma kunye nokuhlala, kwaye ukuhlaselwa kwezi ziza kunokwakha iminyaka.
Ukuxhamla kumhlaba, i-cormorants yakha iikholoni kwiindawo ezikhuselekileyo kwizilwanyana zamademali. Ngamanye amaxesha ezi ziqithi okanye iindawo ezinxweme, kodwa ezinye zakha izidleke (okanye zisebenzise izilwanyana ezindala zeemfucu) kwimithi engafihliyo emile emanzini okanye edibeneyo kwiindawo ezingenakufikeleleka.
Amachibi, imilambo, iindwendwe, kunye namanxweme.
I-Cormorants ifunyanwa phantse apho yonke indawo amanzi adibana khona.
Ngexesha lokuzalisa ukususela ngoSeptemba ukuya kuFebhuwari banomnyama ofanayo. Ukwenza izidleke zazo ezinxwemeni zaselwandle kunye neentonga. Amaqanda inombolo 2 - 3 kwaye i-chalky....more
Iyafana no Gwidi lwengcongolo ibonwa ngombala wentsiba omnyama tsiki. Ibanesingci unyaka wonke kunye nomsila omfutshane....more
Ziqhapheleka ngemiphantsi emikhulu emhlophe ngebala, umqala ukuya emabeleni, zimhlophe nazo ngaphantsi, zimhlophe kakhulu kune ntshontsho likaGwide....more